Kingston Stanley | Sidee u istaagi kartaa oo u heli kartaa CV-gaaga?
Antony Raj Jayamani waxa uu ku soo xigtay Linkedin
Waxaa laga yaabaa 18, 2019
Naveed Khan: Sheekada Pakistan ee Dubai
Waxaa laga yaabaa 19, 2019
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 19, 2019
Kingston Stanley oo leh shirkadda Dubai City
Kingston Stanley - Sidee u istaagi karaa oo u heli kartaa CV-gaaga?
Kingston Stanley - Dhammaan murashaxiinta u halgamaya inay jawaabta helaan, ama a wareysi laga qaaday codsiyada shaqada, halkan dhawr tillaabo oo laga yaabo inay ku caawiyaan.
Xusuusnow maamule khad, maareeyaha shaqaalaynta ama lataliyaha shaqaaleynta inta badan waxaa ku buuxsama boqolaal CV-ga si joogto ah. Nasiib darro, tiro musharixiin ah leeyihiin "qaab firidhsan" shaqaalaysiinta waxayna u soo diri doonaan CV-gaaga door kasta, xiitaa haddii aysan ku habboonayn biilka. Waxaan kugula talin lahaa inaad sameyso waxyaabaha soo socda:
Kaliya u soo dir CV-gaaga doorarka aad u dhigto gabi ahaanba, xagga luqadaha, waayo-aragnimo waaxeed iyo sanado khibrad ah.
Akhri xayeysiinta oo dhan si taxadar leh u hubso inaad saxdo dhammaan sanduuqyada.
Wakaaladaha shaqaalaynta had iyo jeer waxay u baahan doonaan khibrad warshadeed oo gaar ah, maaddaama macmiilkoodu bixin doono lacag u dhigma ciyaarta saxda ah.
Haddii aad rabto inaad isbedesho warshadaha, samee warshad la mid ah, ama aad toos ula xiriirto shirkadaha (ma aha hay'ad).
Markaad CV-gaaga u dirto loo shaqeeyaha, isku day inaad xaqiijiso cidda maareeyaha shaqaalaysiinta tahay iyo arag haddii aad yeelan karto wada-hadal deg deg ah oo ah 5-daqiiqad oo quseeya astaantaada.
La soco halka lagu diray CV-gaaga, abaabusho oo khariidada suuqa la dhig Liiska loo shaqeeyayaasha suurtagalka ah.
Ka qaybgal munaasabadaha shabakadda sida Dubai Lynx, MEPRA, Cityscape, Gitex, Suuqa Safarka Carbeed oo si toos ah ula kulan go'aannada. Wejiga fool ka fool ayaa had iyo jeer ugu fiican.
Ugu dambeyn, qaybta ugu adag ee ka mid ah habka wareysiga waa in la helo wareysiga. Marka tani la xareeyo si aad u hubiso inaad ku qaadato wakhti aad u diyaargarowdid oo aanad soo celin adigoon sameynin cilmi-baaristaada.
Booqo Kingston Stanley
Waxaan sidoo kale ku siin karnaa talooyin markaad sugto wareysi
Xusuuso inaad cilmi-baarista ku samayso shirkadda. Akhri qaybta 'About Us' ee shabakadda oo isticmaal macluumaadkan markaad si toos ah ugala hadashid sababta waxaad jeclaan lahayd inaad iyaga ugu shaqayso. Kaliya ha dhihin inaad rabto inaad u shaqeyso shirkad caalami ah, shirkad weyn ama ganacsi yar. U samee jawaabahaaga SPECIFIC macmiilka. Hoos ka daawo muuqaalka shirkadda ee Wikipedia, sida Tani waxay kuu sheegi doontaa waxyaabo badan oo aad u baahan tahay inaad wax ka ogaatid.
Waqtiga ku jir
Waqti u hel waraysiga. Waqtiga loogu talagalay micnaheedu waa shan ilaa toban daqiiqo hore. Haddii loo baahdo, waqti u qaado inaad baabuur ku waddo goobta wareysiga ka hor waqtiga si aad u ogaatid halka aad u socoto, iyo ilaa intee waxay qaadan doontaa in halkaas la tago.
Labbis dharka guusha
Hubi adiga dharbaaxo ku habboon guusha wareysiga Muuqaalka ugu horreeya ee aad ka sameyso shaqo-bixiyaha mustaqbalka ayaa is badal weyn sameyn kara. Xukunka ugu horeeya ee waraysi qaaduhu sameeyo wuxuu ku saleysan yahay sida aad u egtahay, iyo waxaad xiran tahay. Taasi waa sababta ay had iyo jeer muhiim u tahay in loo labisto si ku habboon wareysiga shaqada.
Su'aalaha lagu diyaarinayo:
1. Maxaad ka ogtahay shirkadda? - Goorma ayaa la aasaasay, xafiisyada xafiisyada adduunka, xafiisyada shaqaalaha iwm.
2. Maxaad daneyneysaa doorkan? - Hadday suurta gal tahay hubi inaad ogaato waajibaadka ku yaal sharraxaadda shaqada
3. Iskuday naftaada - Su'aashan waxa loola jeedaa "i sii sharaxaad guud oo ku saabsan qofka aad tahay, xirfad ahaan u hadlaya, ka hor intaanan ku tilmaanno waxyaabo khaas ah."
4. Waa maxay sababta aan kuu shaqaalayneynno? - Ka fikir khibradahaaga / kartidaada ku habboon
5. Maxay yihiin awoodaada ugu weyn iyo tabar darrada? Hal tusaale oo mid kasta.
6. Waa maxay hadafyadaada mustaqbalka? - Noqo mid dhab ah / xirfad shaqo
7. Maxaad uga tageysaa shaqadaada hadda?
8. Sidee baad cadaadin kartaa? - Ka hadal sida aad u kala hormarsiiso shaqadaada.
9. Maxay tahay mida aad ka filaneyso mushaharkaaga?
10. Waa maxay su'aalaha aad naga haysato?
Kaliya ha oran liistada awoodaha muhiimka ah. Ka hadal xoogagga muhiimka ah ee 1 ama 2 - kuwaas oo ku habboon booska - oo dib ugu celi iyaga Tusaalooyin. Hoos waxaa ku qoran fikrado aad adigu leedahay;
1. Waxaan leeyahay xirfado qoris oo aad u fiican. Waxaan si joogto ah u isugu keenaa jaraa'idyada macaamiisha ama qorshayaasha suuqgeynta ee Agaasimahayga, ogeysiis aad u gaaban.
2. Waxaan ahay xiriiriyaha aad ufiican waxaanan kuhadli karaa Carabi iyo Ingiriis sifiican, aniga oo waayo aragnimo hore aan kashaqeynayay kooxo kala jaad ah oo guuleysta.
Ka doodida daciifnimadaada waa su'aal khaldan. Wareysiga waa inuu yahay MAR WALBA ku qanacsanaanta diidmo aad u yar. Xusuusnow inaad isku daydo inaad daciifnimadaada u beddesho xoog.
1. Waxaan qabaa ujeedo in wax badan dhaho 'haa' In la shaqeeyo ayaa la ii soo gudbiyay aniga oo had iyo jeer mashquul ku noqda xafiiska illaa iyo inta howsha la dhammaystirayo, xiitaa haddii aysan runtii ahayn mas'uuliyadaydu.
MUHIIM: Dhamaadka daciifnimada ayaa ku dhammaada meel fiican.
Su'aalaha aad weydiin kartid
Dhamaadka wareysiga MA weydiiso dhowr su'aalood si loo dhiso xiriir ka dhexeeya wareystaha, sida;
1. Maxaad ugu jeceshahay shirkadda?
2. Waa maxay qaabka maamulka, mise dhaqanka xafiiska?
3. Immisa qof ayaa kooxda jooga?
Ma jiraan wax aad jeclaan lahayd inaan mar kale ku soo noqdo? Waa maxay tillaabooyinka xiga?
Ku saabsan Kingston Stanley
Kingston Stanley waa madaxa takhasuska leh ee dijitaalka ah, wakaaladda qorista iyo farsamaynta shaqaalaysiinta ee ku taal Bariga Dhexe iyo Boqortooyada Midowday, oo si gaar ah ula shaqeysa macaamiisha iyo musharixiinta guud ahaan suuq geynta, waaxaha dijitaalka iyo teknolojiyada tan iyo horraantii 2011.
Waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho, baariso oo aad doorato qofka kugu habboon suuq geyn isku dhafan iyo shaqooyinka teknolojiyada, waxaanan leenahay shabakadda ugu ballaaran, uguna hadda iyo tayeynta u leh murashaxiinta ku habboon. Haddii aad leedahay door u baahan in si deg-deg ah loogu buuxiyo ama faylalka wax lagu dilo, waxaad ka heli doontaa waxaad halkan raadineyso. Anshax xoog leh, daacadnimo, daacadnimo iyo la shaqeynta ujeeddo ayaa ah afarta tiir ee ganacsigeenna taasna waxay muujineysaa sumadeena, shaqaalaheena iyo dadka aan matalno.
Shirkadda Dubai City hadda siinta hagyo fiican ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Shaqooyinka ku yaala Dubai. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.
Isutagga Imaaraatka Carabta - Tilmaanta Kordhinta